बिहेअघि सेक्स गरेको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ? – Daunne News
By Daunne News	 Last updated Jun 5, 2019
महिलाले विवाहअगाडि यौनसम्पर्क राखे÷नराखेको कुरा थाहा पाउन सामान्य मान्छेले पहिलो यौन सम्पर्कको बेला रगत आए/नआएको वा दुखे/नदुखेको कुरालाई आधार मानेर हेर्ने, सोच्ने र बुझ्ने गरेको पाइन्छ । अर्कातिर पुरुषमा लिंगको अगाडिको छाला फाटे/नफाटेको, पछाडिसम्म खुले/नखुलेको आधारमा यौनसम्पर्क भए/नभएको आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
माथि उल्लेखित सोच गलत हुन् ।
शीघ्र स्खलन हुन्छ ? यसो गर्नूस्
महिलाले स्तन कसिलो बनाउने घरेलु उपचार विधि
लामो समय सम्म सेक्स गर्ने उपायहरु हेर्नुहोस